Ka Hortagga Madax Xanuunka Xilliga Soonka Iyo Talooyin Muhiim Ah - Daryeel Magazine
Ka Hortagga Madax Xanuunka Xilliga Soonka Iyo Talooyin Muhiim Ah
Inta badan bisha soonka inta lagu gudo jiro dadku waxa ay maalintii inta ay af-xidhan yihiin isku arkaan madax xanuun leh marxalado kala duwan, mid sahal ah, mid dhexdhexaad ah iyo mid aad ugu adag qofka. Sababaha madax xanuunkaasi waa ay tiro badan yihiin, waxase ugu waaweyn oo aynu xusi karnaa, Sonkorta / Macaanka oo hoos u dhaca, Maadadda Caffeine oo inta badan laga helo shaaha iyo bunka oo hoos u dhacda, caadadii hurdo ee qofka oo isbeddel ku yimaaddo, tusaale ahaan xilligii la seexanayey iyo waqtiga toosidda iyo waqtiyada uu qofku hurdada ka toosayo habeenka gudihiisa iyo ugu dambayntii soonka gaajiadiisa oo iska wata tacab nafsi ah iyo mid jidheed.
Qormadan waxa ayny ku eegaynaa madax xanuunka xilliga soonka iyo sida uguhabboon ee loola tacaali karo:
Sababta iyo sida looga hor tegi karo: – Ugu horreynba waa in qofku uu ku dadaalo in maalmaha bilashada Soonka ka horreysa uu si tartiib-tartiib ah u soo yareeyo xaddiga Caffeine ee uu qaadanayo, tusaale ahaan in uu yareeyo bunka iyo shaaha uu cabbayo illaa uu gaadho in maalinta soonka ka horreysa joojiyo.
– Qallal: jidhkeennu boqolkiiba 50 illaa 75 waa biyo, unugyo ka mid ahna boqolkiiba 90 ayaa biyo ah, taas waxa ay caddaynaysaa sida aanu jidhku biyaha uga maarmi karin, hoos u dhacooduna waxa uu keenayaa jidhka oo engaga waxaana ka dhasha madax xanuun badan.
1. Dadka madax xanuunka badan waxaa lagula talinayaa in ay iska jiraan waxyaabaha xilliga soonka sii badiya madax xanuunka, sida in kaadida uu qofku ceshado, daalka nafsiga ah iyo burburka, shaqada aadka u badan, hurdo yaraanta.
2. Madax xanuunka Af-furka kadib- haddii aad madax xanuun isku aragto af-furka kadib waxa ay u badan tahay in cuntada aad cuntay ay ka badantahay intii aad qaadi karaysay caafimaad ahaan. Cunto badan oo aad cuntaa waxa ay sababtaa in dhiigga jidhka ku jira badankiisu u weecdo dhinaca hab-dhiska dheefshiidka ee shaqada badan ee ridqista cuntada ahi ka socoto si hawshiisu ugu fududaato, taasina waxa ay keenaysaa in uu yaraadoo dhiigga gaadhaya unugyada maskaxda, taasina ay keento madax xanuun, burbur iyo in maskaxdu shaqadii looga baahnaa yarayso.
3. Ugu dambayntii talada khubarada caafimaadku waxa ay sheegeen in xilliyada cuntada oo la jaangoyn waayo, sida in waqtiyo kala duwan la casheeyo ama saacadaha suxuurta hadba dhna loo raraa ay keento madax xanuun.
Naas Nuujinta Xilliga Soonka Iyo Talooyinka Dhakhtarka Daawada Dabiiciga ah ee Madax Xanuunka Dhabar Xanuunka Oo Noqday Cudurka Dunida Loogu Cabasho Badanyahay, Sababta Keenta Iyo Talooyin Sida Ugu Fiican Ee Aad Ku Garan Karto In Ilmahaaga Uu Hayo Madax Xanuunka Dhan-Jafka Ah